Úrsula Iguarán: mufananidzo wevakadzi veLatin America muMacondo | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Bvunzo, Vanyori, Fantasy, Type, Literature, Novela
Gabriel García Márquez, munyori weMamwe Makore Mazana Ega.
Kana chimwe chinhu chakapfuura Gabriel García Márquez Yaive mune tino iyo yaakateedzera kukosha kweumwe neumwe manhamba aakaisanganisira pabasa rake, uye haingotauri nezvehunhu chete, aiwa, inotaura nezve hunhu hwemugari netsika dzake. Izvo hazvina basa nenyika kana dunhu, Ularsula Iguarán ari muenzaniso wakajeka we maumbirwo uye makore Vakadzi veLatin America.
Vakadzi vechiLatin vanoshanda nesimba, vakashinga, mutungamiri uye anoriritira mhuri, ane rudo matriarch, akazvipira. Mazhinji dzimba dzeLatino dzakagadzirwa uye dzinotsigirwa nekuzvipira kwaamai. Kunyangwe zvisiri pachena, ndiye iye ndiani anopa kudziya kweimba, uyo anoshandura iwo madziro mana kuita imba, nekuti ndiye iye amene anowanzotora nguva yakawanda aripo. Sarudzo dzako, tsika, uye dzidziso zvinotungamira vaunoda, kunyangwe vaenda.
1 Mufananidzo we ularsula
2 Makore zana okusurukirwa
3 Gabriel García Márquez uye wake Mubayiro weNobel
Mufananidzo we ularsula
Ularsula Iguarán aive mukadzi weColombia uyo, pamwe nemurume wake José Arcadio Buendía, yakavambwa Macondo. Akanga akatsunga uye akasimba zvekuti akatanga dhorobha rake nekuzvara munhu wekutanga kugara, akaronga kurongeka nenzvimbo yedzimba, akasarudza iwo mavara aizo shongedza dhorobha, maruva ayo anonyudza mamiriro ehwema, shiri yaizozadza denga nemumhanzi uye yakanga ichizvipira kufira Macondo.
Makore zana okusurukirwa iyo inoverengeka iyo chero chero munhu anogara kubva kuMexico kuenda kumaodzanyemba anogona kuenderana. Ichokwadi kuti chimwe chinhu nezve Úrsula chinoita kuti umutse ambuya, tete, mukadzi wako kana amai vako. Uye ndezvekuti anomiririra mufananidzo wakajeka uye wakanyatsojeka wevakadzi veLatin America.
Mufananidzo waMacondo nechikamu chevanhu vake.
Yakanyorwa naGabriel García Márquez (1927-2014) kuMexico, zvakatora mwedzi gumi nesere kuti ipere. Yakaburitswa kekutanga muBuenos Aires muna 1967, neSudamericana imba yekutsikisa. Kubva ipapo yakashandurwa mumitauro makumi matatu nemashanu, uye makopi anodarika mamirioni makumi matatu akatengeswa. Inoonekwa se chinyorwa chehunyanzvi Puerto Rico American uye yepasirese.
Muna 2007 yakarongedzwa se rimwe remabasa akakosha emutauro wechiCastilian pa IV International Congress yeMutauro weSpanish. Gore rimwe chetero shanduro itsva yakaburitswa. Iyo nyowani yekudhinda yakaitwa yekupemberera makumi mana emakore enoveli uye makumi masere emakore emunyori wayo. Izvi zvakaverengerwa nekuda kwekuedza kwakaitwa neChishanu cheZvikoro zveMutauro wechiSpanish pamwe neRoyal Spanish Academy.
Zvanga zva inowanikwa mumabhuku zana ezana ramakore rechi100 kubva mupepanhau reFrance Le Monde, Chinyorwa chezana zana rakanakisa enganonyorwa muSpanish yezana ramakore rechi100 repepanhau reSpain El Mundo uye mumabhuku zana akanakisa enguva dzese neNorway Book Club.
Gabriel García Márquez uye wake Mubayiro weNobel
Marquez akahwina mubairo weNobel wemabhuku muna 1982 "nekuda kwemanovel ake uye nenyaya pfupi, iyo inonakidza uye yechokwadi inosanganiswa munyika ine hupfumi hwakaumbwa, inoratidzira hupenyu nemakakatanwa ekondinendi.
Mufananidzo weposita uchinongedzera kuguta reMacondo - Colombiainforma.com.
Chero veSpanish vakaverenga ino nhoroondo vanonzwa vachizivikanwa nemumwe wevanhu vake kana zvidimbu zvezvose. Vakadzi vanoona kukura kwavo mu Úrsula, kusava nemhosva kwake muRemedios "la bella", kuomesa musoro kwake muAmaranta uye kusada kwake kusingadzorwi muRebeca.
Varume vachagara vachikwanisa kuziva pamwe nekufungidzira, simba uye runako rwevaJosé Arcadios kana nekunyara, kuzvipira uye kuchengetedza kwevaAurelians. Izvo hazvina basa nenyika kana dunhu, Márquez uye nyaya dzake ndizvo chikamu chemweya weLatinos.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Ularsula Iguarán: mufananidzo wevakadzi veLatin America kuMacondo
Kuzvikudza uye Kusarura naJane Austen